Umthetho wabucala. Imigaqo neMiqathango | CELISA
Igqityelwe ukuvuselelwa: 10 Septemba 2018
At eyemesschools.com, sizibophelele ekukhuseleni ubumfihlo bakho njengomthengi kunye nondwendwe kwi-intanethi kwiwebhusayithi yethu. Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo malunga nawe ukuze sandise iinkonzo esizinikezela kuwe. Siyabuhlonela ubumfihlo kunye nokugcinwa kolwazi oluyimfihlo kwaye unamathela kwimigaqo-nkqubo yabucala yase-Australia. Nceda ufunde umgaqo-nkqubo wethu wabucala ongezantsi ngononophelo.
IINKCUKACHA ASIQokelela KUWE
Ngexesha undwendwela iwebhusayithi yethu okanye ukusebenzisa iimveliso kunye neenkonzo zethu, sinokufumana le nkcukacha ilandelayo malunga nawe: igama, igama lenkampani, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, iinkcukacha zekhadi letyala, idilesi yokuhlawula, indawo ekuyo, idilesi ye-IP, iimpendulo zophando, imibuzo yenkxaso, amagqabantshintshi eblogi kunye nokusingathwa kweendaba zentlalo (kunye 'neDatha yoBuntu').
Iinkonzo zethu azijoliswanga kubantu abaphantsi kwe-18 kwaye asiqokeleli i-datha yeenkcukacha zobuqu kuye nabani na ophantsi kwe18. Ukuba sisazi ukuba umntwana ophantsi kwe18 usinike idatha yoBuqu, siya kuyicima ngokukhawuleza loo lwazi. Ukuba ungumzali okanye umgcini womntwana kwaye uyakholelwa ukuba basinike iNkcukacha zobuqu ngaphandle kwemvume yakho, nceda unxibelelane nathi.
Ungajonga, ulungise, uhlaziye okanye ucime iiNkcukacha zobuqu ngokungena kwiakhawunti yakho kwaye wenze notshintsho ngokwakho okanye unxibelelane nathi ngqo ukuba senjenjalo.
INDLELA ESISisebenzisa NGAYO INKCAZELO YAKHO
Ulwazi oluchaziweyo: Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo ukuhambisa iinkonzo zethu kuwe, kubandakanya: ukunxibelelana nawe, ukubonelela ngenkxaso yezobuchwephesha, ukukwazisa uhlaziyo kunye nokunikezela, ukwabelana ngomxholo oluncedo, ukulinganisa ukoneliseka kwabathengi, ukufumanisa iingxaki kunye nokubonelela wena ngobuqu amava wewebhusayithi.
Unxibelelwano lokuthengisa luthunyelwa kuwe kuphela ukuba ucelile okanye ubhalisile. Unokuphuma kunxibelelwano lwethu lokuthengisa nangaliphi na ixesha ngokusishiya okanye ukusithumela nge-imeyile kwaye isicelo sakho siya kwenziwa ngokukhawuleza.
Ulwazi olungachazwanga ngobuqu: Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo kwiifom ezihlanganisiweyo nezingaziwayo ukuba sithuthukise iinkonzo zethu, kubandakanya: ukuphatha iwebhusayithi yethu, ukuvelisa iingxelo kunye nohlalutyo, ukubhengeza iimveliso kunye neenkonzo zethu, ukuchonga iimfuno zomsebenzisi kunye nokuncedisa ekuhlangabezaneni neemfuno zabathengi ngokubanzi .
Luphi na ulwazi olukhetha ukuba lufumaneke esidlangalaleni, njengogqabaza ngeblogi kunye nobungqina kwiwebhusayithi yethu, buya kufumaneka ukuze abanye babone. Ukuba ulususa kamva olu lwazi, iikopi zinokuhlala zibonakala kumaphepha akhutshwe ngokugciniweyo kunye agcinwe kwezinye iiwebhusayithi okanye ukuba abanye bakope okanye balugcina olo lwazi.
UKUGCINWA NOKHUSELEKO LELWAZI LAKHO
Siza kusebenzisa zonke iindlela ezifanelekileyo ukukhusela ubumfihlo beDatha yakho buqu xa sisezandleni okanye kulawulo lwethu. Lonke ulwazi esilufumana kuwe lugcinwe kwaye lukhuselekile kumaseva ethu akhuselekileyo ekusebenziseni okungagunyaziswanga okanye ukufikelela. Ulwazi ngekhadi letyala lufihliwe ngaphambi kokuba luhanjiswe kwaye alugcinwa kuthi kwiseva zethu.
Ukusenza sikwazi ukuhambisa iinkonzo zethu, sinokudlulisela ulwazi esiziqokelele ngawe, kubandakanya neDatha yoBuntu, kwimida yokugcinwa kunye nokulungiswa kumazwe ngaphandle kwe-Australia. Ukuba idatha yakho yobuqu idluliselwe kwaye isenziwa ngaphandle kwe-Australia, iya kudluliselwa kuphela kumazwe anokhuseleko olukhuselekileyo lwabucala.
Sigcina ulwazi lwakho lomntu ixesha elide njengoko kufuneka sinikezele iinkonzo kuwe kwaye njengoko kungenjalo kufuneka sithobele uxanduva lwethu olusemthethweni, ukusombulula iimbambano nokunyanzelisa izivumelwano zethu.
Kwimeko apho kukho ukophula ukhuseleko lwethu kwaye neDatha yakho yoBuntu ithathelwa ingqalelo, siya kukwazisa kwangoko ngokuhambelana nomthetho osebenzayo.
IIKOTI kunye neepikseli
I-cookie yifayile encinci ebekwe kwisiphequluli sakho sewebhu eqokelela ulwazi malunga nokuziphatha kwakho kwiwebhu. Ukusetyenziswa kweicookies kuvumela iwebhusayithi ukuba ihambelane nesimo sayo kwiimfuno kunye nezinto ezikhethwayo. Iicookies azifikeleli kulwazi olugcinwe kwikhompyuter yakho okanye nakweyiphi na iNkcukacha zobuqu (igama, idilesi, idilesi ye-imeyile okanye inombolo yomnxeba). Uninzi lwebrawuza zewebhu zizamkela ngokuzenzekelayo ii-cookies kodwa unokukhetha ukwala iicookies ngokutshintsha iiseto zakho zokukhangela. Oku, nangona kunjalo, kungakuthintela ekusebenziseni ngokupheleleyo iwebhusayithi yethu.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa iicookies ukuhlalutya ukugcwala kwiwebhusayithi, ukubonelela ngokwabelana ngeendaba zosasazo kunye nokuthanda ukusebenza kunye nokusinceda ukubonelela ngamava angcono endwendwe. Ukongeza, iicokies kunye neepuzzle zisenokusetyenziselwa ukukhangela iintengiso ezifanelekileyo kubakhenkethi bewebhu ngokusebenzisa iinkonzo zomntu wesithathu ezinje ngeAdwords zikaGoogle kunye neeNtengiso zeFacebook. Ezi ntengiso zinokuvela kule webhusayithi okanye ezinye iiwebhusayithi ozindwendwelayo.
Ukwabelana NGOLWAZI LAKHO NGEXESHA LESITHATHU
Asenzi kwaye asiyi kuthengisa okanye ukuthengisa kwiDatha yoBuntu okanye naluphi na ulwazi lwabathengi.
Iinkcukacha zakho zedatha ziveliswa kuphela kubathengisi besithathu xa kufuneka ngokomthetho, iimpahla okanye iinkonzo ozithengileyo, ngenkqubo yokuhlawula okanye ukukhusela ilungelo lethu lobunini, uphawu lwentengiso kunye namanye amalungelo asemthethweni. Ukuya kuthi ga apho sabelana ngeDatha yoBuqu kunye nomnikezeli ngenkonzo, siya kwenza njalo ukuba iqela elo liye lavuma ukuthobela imigangatho yethu yabucala njengoko ichaziwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala nangokomthetho osebenzayo. Izivumelwano zethu nomntu wesithathu ziyabathintela ekusebenziseni nakweyiphi na iNkcukacha zoBucala ngayo nayiphina injongo ngaphandle kokuba kwabelwana ngayo.
Ixesha nexesha sinokufuna ukubhengeza ulwazi oluthile, olunokubandakanya iNkcukacha zobuqu, ukuthobela imfuno yomthetho, njengomthetho, umgaqo, inkundla, ipenena, iwaranti, xa kuqhubeka ityala okanye ekuphenduleni Isicelo se-arhente yokunyanzeliswa komthetho. Kwakhona, sinokusebenzisa iiNkcukacha zobuqu ukukhusela amalungelo, impahla okanye ukhuseleko eyemesschools.com, abathengi bethu okanye iqela lesithathu.
Ukuba kunokutshintsha kolawulo kwelinye lamashishini ethu (nokuba kungokuhlangana, ukuthengisa, ukuhambisa izinto okanye kungenjalo) ulwazi lwabathengi, olunokubandakanya iNkcukacha zobuqu, lungatshintshelwa kumthengi phantsi kwesivumelwano semfihlo. Siza kuvakalisa kuphela iNkcukacha zoBuqu ngokholo olulungileyo kwaye apho kufuneka khona naziphi na kwezi meko zilapha ngasentla.
XHUMANA KWANYE IWEBSITES
Le webhusayithi inokuqulatha iilinki kwezinye iiwebhusayithi. La makhonkco enzelwe ukukulungela kuphela. Amakhonkco kwiiwebhusayithi zesithathu ayenzi nkxaso-mali okanye yokuxhasa okanye ukuvunywa kwezi webhusayithi. Nceda uqaphele ukuba asinoxanduva lomsebenzi wobumfihlo wezinye iwebhusayithi. Sikhuthaza abasebenzisi bethu ukuba baqaphele, xa bemka kwiwebhusayithi yethu, ukuba bafundele ingxelo yabucala nganye kunye ne-webhusayithi eqokelela ulwazi olufanelekileyo. Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza kuphela kulwazi oluqokelelwe yile webhusayithi.
UTSHINTSHO KUMGAQO-NKQUBO WOKUGQIBELA
Njengoko siceba ukuqinisekisa ukuba umgaqo-nkqubo wethu wabucala uhlala ukho, lo mgaqo-nkqubo unokutshintsha. Singayihlengahlengisa le polisi nangaliphi na ixesha, ngokokubona kwethu kwaye zonke iinguqulelo ziya kusebenza ngokukhawuleza ekuthumeleni kwethu izilungiso kule webhusayithi. Nceda ubuye rhoqo ukujonga umgaqo-nkqubo wethu wabucala.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngalo naliphi na ixesha malunga nemigaqo-nkqubo yethu yabucala okanye ukusetyenziswa kweenkcukacha zakho, nceda unxibelelane nathi apha https://www.stopsafeschools.com/contact kwaye siya kuphendula ngaphakathi kweeyure ze-48.
NICELA UKUZE UZIFUNDE NGEENKONZO KUNYE NEMIQATHANGO YOKUSETYENZISWA NGOKUQINILEYO Ngaphambi kokuba usebenzise le WEBSITE.
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu. Ukuba uyaqhubeka nokukhangela kunye nokusebenzisa le webhusayithi uyavuma ukuthobela kwaye ubophelelekile ngokwale mibandela ilandelayo yokusetyenziswa, kunye nomgaqo-nkqubo wethu wabucala kunye nokuchazwa kwewebhusayithi, ukulawula eyemesschools.comubudlelwane nawe budibene nokusebenzisa kwakho le webhusayithi.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, ubonakalisa ukwamkela kwakho le migaqo kunye neemeko zokusetyenziswa. Ngeenjongo zezi meko kunye neemeko, "Us", "Ethu" kunye no "Si" abhekisele kuzo eyemesschools.com kwaye u- "Wena" no "Wakho" ubhekisa kuwe, kubaxumi, undwendwe, umsebenzisi wewebhusayithi okanye umntu osebenzisa iwebhusayithi yethu.
Sinelungelo lokutshintsha, ukuguqula, ukudibanisa okanye ukususa ezinye iziqendu nangaliphi na ixesha. Nceda ujonge la magama rhoqo ngaphambi kokusebenzisa iwebhusayithi yethu ukuba uyazi ukuba naluphi na utshintsho olwenzekayo. Siya kuzama ukuqaqambisa naluphi na utshintsho olubalulekileyo okanye olomeleleyo kuwe apho kunokwenzeka. Ukuba ukhetha ukusebenzisa iwebhusayithi yethu siza kuthi siyithathele ingqalelo le nto njengobungqina obucacileyo besivumelwano sakho nokwamkela kwakho ukuba le migaqo ilawula eyakho kunye eyemesschools.comamalungelo noxanduva omnye komnye.
Yinto ebaluleke ngaphambili kuwe ukusebenzisa iwebhusayithi yethu ukuba uyavuma kwaye uyayamkela eyemesschools.com ayinaxanduva ngokwasemthethweni kuyo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo onokuthi ubandezeleke ngokunxulumene nokusetyenziswa kwewebhusayithi, nokuba zivela kwiimpazamo okanye ngokushiyiweyo kumaxwebhu ethu okanye kulwazi, naziphi na iimpahla okanye iinkonzo esinokubonelela ngazo okanye kolunye usetyenziso lwewebhu. Oku kubandakanya ukusetyenziswa kwakho okanye ukuthembela kuwo nawuphi na umxholo wesithathu, amakhonkco, izimvo okanye intengiso. Ukusebenzisa kwakho, okanye ukuthembela, kulo naluphi na ulwazi okanye izixhobo ezikweli ziko lewebhu zisemngciphekweni wakho, esingayi kuba noxanduva kuzo.
Iya kuba luxanduva lwakho ukuqinisekisa ukuba naziphi na iimveliso, iinkonzo okanye ulwazi olufumaneka kule webhsayithi luhlangabezana neemfuno zakho ezithile. Uyavuma ukuba olu lwazi kunye nezixhobo zinokuqulatha ukungachaneki okanye iimpazamo kwaye ngokucacileyo asibeki luxanduva lwayo nayiphi na into engachanekanga okanye iimpazamo ukuya kuthi ga ngokupheleleyo kuvunyelwe ngumthetho.
UKHUPHISWANO NOMTHETHO WOKUQINISA
Ngeenjongo zeShedyuli 2 yoMthetho wabaThengi baseAustralia, ngakumbi amaCandelo 51 ukuya kwi-53, 64 kunye ne-64A yeCandelo 3-2, iCandelo 1, iCandelo loNyaka loKhuphiswano noMthetho wabathengi 2010 (Cth), eyemesschools.comuxanduva lwalo naluphi na ukophula kwethuba lesi sivumelwano lubekelwe umda: ukubonelela iimpahla okanye iinkonzo kuwe kwakhona; ukutshintsha iimpahla; okanye intlawulo yeendleko zokuba iimpahla okanye iinkonzo zinikezelwe kuwe kwakhona.
Kuya kuba ngaphezulu kweminyaka eyi-18 ukusebenzisa le webhusayithi kunye nokuthenga iimpahla okanye iinkonzo.
Iimpahla ezibonakalayo zinokuhanjiswa yiAustralia Post kunye / okanye ezinye iinkampani ezihambisa izinto ezithandwayo. Ukuhanjiswa kuqhutywa ngokukhawuleza kwakuba kufunyenwe intlawulo epheleleyo. Ukuhanjiswa kunokuthatha phakathi kwe-2 kunye neentsuku ze-14, kuxhomekeke kukhetho lokuhambisa. Ii-oda ezonakalisiweyo okanye ezilahlekileyo kufuneka zisonjululwe ne-Australia Post okanye inkampani yekhuriya ngqo kwaye asinoxanduva lweempahla zonakaliswe ekuhambeni okanye ezingafunyenwanga. Ukutshintshwa kwezinto ezonakeleyo okanye ezilahlekileyo zenziwa ngokokubona kwe eyemesschools.com.
Iimpahla zedijithali zithunyelwa kwangoko. Nceda uqaphele ukuba kukho ubungozi bendalo obunxulumene nokukhuphela nayiphi na isoftware kunye neempahla zedijithali. Ukuba unazo naziphi na iingxaki zobugcisa bokukhuphela naziphi na iimpahla zethu, nceda unxibelelane nathi ukuze sizame ukukunceda.
eyemesschools.com iphatha ukubuyisa kunye neenkqubo zokubuyiselwa kwemali ngokungqinelana nomthetho wokhuselo lwabathengi wase-Australia.
Ukuba unqwenela ukubuyisa iodolo yakho, nceda usazise ngaphakathi iintsuku zokuthenga nesizathu esivakalayo sokubuyela. Ukuba asikwazi ukusombulula isikhalazo sakho okanye ukuba sikuncede ngakumbi, siya kubuyisela imali kwimpahla ethengweyo ngexesha elifanelekileyo. Izinto ezingavulelwanga ziya kubuyiselwa ngokupheleleyo. Ukubuyiselwa kwemali kuya kwenziwa ngokukhawuleza kwaye intlawulo yenziwe ngendlela efanayo naleyo ubuhlawule ngayo. Yonke imbuyiselo yenziwa ngokokubona kwe eyemesschools.com.
eyemesschools.com Ngamana amaxesha ngamaxesha inokubonelela kwiwebhusayithi yayo, amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi, intengiso kunye nolwazi kwezo webhusayithi zilungiselelwe wena. Oku akuthethi ukuba inkxaso, ukuxhasa, okanye ukuvuma okanye ulungiselelo phakathi eyemesschools.com kunye nabanini bezo webhusayithi. eyemesschools.com ayithwali xanduva lwayo nayiphi na imixholo efumaneka kwiiwebhusayithi ezidibeneyo.
eyemesschools.comIwebhusayithi inokuqulatha ulwazi okanye intengiso ebonelelwe ngabantu besithathu eyemesschools.comayamkeli xanduva lakuya nakuphi na ulwazi okanye icebiso elinikezwe wena ngqo ngumntu wesithathu. Senza 'isindululo' kuphela kwaye asiboneleli ngcebiso okanye sithathe uxanduva ngalo naluphi na uqeqesho olufunyenweyo malunga noku.
Ngokwenyani epheleleyo evunyelweyo ngumthetho, eyemesschools.com Uzibhengeza ngokupheleleyo zonke iziqinisekiso, eziveziweyo okanye ezichaziweyo, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iziqinisekiso ezichaziweyo zokurhweba kunye nokuqina kwanoma iyiphi injongo ethile. eyemesschools.com ayiniki siqinisekiso sokuba amaxwebhu, iimpahla okanye iinkonzo ziya kuba zingenazimpazamo, okanye ukuba iziphene ziya kulungiswa, okanye ukuba iwebhusayithi yethu okanye iseva yayo ayinazintsholongwane okanye naziphi na izinto eziyingozi.
Ngelixa thina, ngalo lonke ixesha sizama ukuba nolwazi oluchanekileyo, oluthembekileyo nolusemgangathweni kwiwebhusayithi yethu, asikagunyazisi okanye senze naziphi na iziboniso malunga nokusetyenziswa okanye isiphumo sokusetyenziswa kwalo naluphi uxwebhu, imveliso, inkonzo, ikhonkco okanye ulwazi kwiwebhusayithi yayo okanye ngokuchanekileyo, ukuchaneka, ukuchaneka, ukuthembeka, okanye ngenye indlela.
Luxanduva lwakho kuphela hayi uxanduva eyemesschools.com ukuthwala naziphi na iindleko zenkonzo, zokulungisa, okanye zokulungisa. Umthetho osebenzayo kurhulumente wakho okanye ummandla wakho awunakuvumela oku kungabandakanywa, ngakumbi ukungabandakanywa kwezinye iziqinisekiso ezichaziweyo. Ezinye zezi zinto zingasentla azisebenzi kuwe kodwa kufuneka uqiniseke ukuba uyayazi nayiphi na ingozi onokuyisebenzisa ngokusebenzisa le webhusayithi okanye naziphi na iimveliso okanye iinkonzo ezinokunikwa ngayo. Luxanduva lwakho ukwenjenjalo.
At eyemesschools.com, sizimisele ukukhusela ubumfihlo bakho. Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo malunga nawe ukuze sandise iinkonzo esizinikezela kuwe. Siyabuhlonela ubumfihlo kunye nokugcinwa kolwazi oluyimfihlo kwaye unamathela kwimigaqo-nkqubo yabucala yase-Australia. Nceda ufunde uMgaqo-nkqubo wethu wabucala ngocoselelo.
Unokutshintsha iinkcukacha zakho ngalo naliphi na ixesha ngokusicebisa ngokubhala nge-imeyile. Lonke ulwazi esilufumana kubathengi bethu lukhuselwe ziiseva zethu ezikhuselekileyo. eyemesschools.comIsoftware ekhuselekileyo yesoftware efihla yonke ingcaciso yabathengi ngaphambi kokuba ithunyelwe kuthi. Ngaphaya koko, yonke idatha yabathengi eqokelelweyo ikhuselekile ekusetyenzisweni okungagunyaziswanga okanye ukufikelela. Ulwazi ngekhadi letyala alugcinwanga kuthi kwiseva zethu.
Asenzi kwaye asizukuthengisa okanye sijongane nolwazi lobuqu okanye lwabathengi. Sisenokusebenzisa ngengqondo eqhelekileyo ngaphandle kokubhekisa kwigama lakho, ulwazi lwakho ukudala izibalo zokuthengisa, ukukhangela iimfuno zabasebenzisi kunye nokunceda ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ngokubanzi. Ukongeza, sinokusebenzisa ulwazi olunikezelayo ukuphucula iwebhusayithi yethu kunye neenkonzo kodwa hayi kolunye usetyenziso.
eyemesschools.com inokufuneka, kwiimeko ezithile, ukubhengeza ulwazi ngokholo olulungileyo kunye nalapho eyemesschools.comuyacelwa ukuba akwenze kwezi meko zilandelayo: ngomthetho okanye nangayiphi na inkundla; ukunyanzelisa imiqathango yazo naziphi na iimvumelwano zabathengi; okanye ukukhusela amalungelo, impahla okanye ukhuseleko lwabathengi bethu okanye iqela lesithathu.
Ukuba ukwishishini lokudala amaxwebhu afanayo, iimpahla okanye iinkonzo ngeenjongo zokubonelela ngomrhumo kubasebenzisi, nokuba ngabasebenzisi beshishini okanye abasebenzisi basekhaya, ke ulikhuphiswano eyemesschools.com. eyemesschools.com ngaphandle kwaye akuvumeli ukuba usebenzise okanye ungene kwiwebhusayithi yethu, ukukhuphela nawaphi na amaxwebhu okanye ulwazi kwiwebhusayithi yakhe okanye ufumane naluphi na uxwebhu olunjalo okanye ulwazi ngomntu wesithathu. Ukuba uyaphula eli gama emva koko eyemesschools.com Izokuthatha uxanduva olupheleleyo lwayo nayiphi na ilahleko esinokuthi siyixhase kwaye siphinde sikugcine kuxanduva lwakho ngayo yonke inzuzo onokuyenza ngenxa yokusetyenziswa okungabhalwanga nokungafanelekanga. eyemesschools.com unelungelo lokukhuphela kunye nokwala nawuphina umntu ukufikelela kwiwebhusayithi yethu, iinkonzo okanye ulwazi ngendlela yethu.
UCWANGCISO LOKUQHUTYWA, IBHASARI YOKUGQIBELA NOKUGQIBELA UKUSETYENZISWA
Le webhusayithi iqulathe izinto esinazo okanye ezinelayisensi kuthi. Lo mbhalo ubandakanya, kodwa ungaphelelanga apho, uyilo, ukwakheka, ukujonga, imbonakalo, uphawu lwentengiso kunye nemizobo. Akuvunyelwanga ukuba uphinde uvelise amaxwebhu, ulwazi okanye izixhobo kwiwebhusayithi ngenjongo yokuthengisa okanye ukusetyenziswa ngumntu ongaphandle. Ngokukodwa awuvunyelwe ukuphinda ushicilele, ulayishe, ugqithise ngombane okanye kungenjalo usasaze naziphi na izinto, amaxwebhu okanye iimveliso ezinokufumaneka ngokukhutshelwa amaxesha ngamaxesha kule webhusayithi.
eyemesschools.com ngokucacileyo ugcina onke amalungelo obunini obunikazi kunye nophawu lwentengiso kuwo onke amaxwebhu, ulwazi kunye nezixhobo ezikwiwebhusayithi yethu kwaye sinelungelo lokuthatha amanyathelo ngakuwe xa usaphula nayiphi na yezi zinto.
Nakuphi na ukwabiwa ngokutsha okanye ukuveliswa kwakhona kwenxalenye okanye konke okuqulathwe kulo naluphi na uhlobo kuthintelwe ngaphandle koku kulandelayo: ungaprinta okanye ukhuphele kwisicatshulwa sediski sakwediski yakho ukuze uyisebenzisele wena buqu okanye ungayithengisi kuphela; kwaye unokukopa umxholo kumntu ngamnye ozisebenzisela yena, kodwa kuphela ukuba uyamkela iwebhusayithi njengemithombo yezinto.
Akunakho, ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ebhaliweyo, ukusabalalisa okanye ukuxhaphaza umxholo. Awukwazi ukuyithumela okanye ukuyigcina nakweyiphi enye iwebhusayithi okanye enye indlela yohlobo lokubuyisela i-elektroniki.
Le migaqo kunye neemeko zimele isivumelwano sonke phakathi kwakho kunye eyemesschools.com ngokubhekisele kusetyenziso lwakho kunye nokufikelela kwi eyemesschools.com's iwebhusayithi kunye nokusebenzisa kwakho kunye nokufikelela kumaxwebhu kunye nolwazi kuwo. Alikho elinye igama elinokuqukwa kwesi sivumelwano ngaphandle kwaxa kufanelekile ukuba libandakanywe nawo nawuphi na umthetho weLizwe eliqhelekileyo okanye naliphi na ilizwe okanye ilizwe. Onke amagama abekiweyo ngaphandle kwalawo aboniswe ngummiselo kwaye angenakukhutshwa ngokuthe ngqo ayabandakanywa ngokucacileyo.
UKUBONELELWA KWEENKONZO ZENGXESHA
Apho naliphi na igatya okanye ixesha elingasentla linokuthi nawuphi na umthetho osebenzayo ubengekho mthethweni, lingasebenzi, okanye linganyanzeleki kulo naliphi na ilizwe okanye ummandla lowo ke loo magatya akangekhe asebenze kwelo lizwe okanye kwiNgingqi yakhe kwaye aya kuthathwa njengengazange abandakanywe kule migaqo nemiqathango Elo lizwe okanye le Ntsimi. Igatya elinjalo ukuba lisemthethweni kwaye linyanzelekile kulo naliphi na elinye ilizwe okanye ilizwe eli liya kuqhubeka nokunyanzeliswa ngokupheleleyo kwaye yinxalenye yesi sivumelwano kwamanye amazwe nakwamanye amazwe. Ukukhutshelwa ngaphandle kwalo naliphi na ixesha elilandelwe lo mhlathi akunakuchaphazela okanye kuguqula ukunyanzeliswa ngokupheleleyo nokwakhiwa kwamanye amagatya ale migaqo kunye neemeko.
Esi sivumelwano kunye nale webhusayithi ziphantsi kwemithetho ye VICTORIA naseOstreliya. Ukuba kukho imbambano phakathi kwakho kunye eyemesschools.com Iziphumo zokumangalela emva koko kufuneka ungenise kulawulo lweenkundla ze VICTORIA.